Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga fulinta Ururka UCSO oo uu kulankoodii Caadiga Ahaa uqabsoomay.
Gudiga fulinta Ururka UCSO oo uu kulankoodii Caadiga Ahaa uqabsoomay.
Gidiga fulinta ee Ururka Culimada soomaalida Ogadenia ee magaciisa loosoo gaabiyo UCSO ayaa kulan muhiim ah kuyeeshay xerada IFO ee deegaanka Dhadhaab.
Kulankan oo ahaa midkii caadiga ahaa ee gudiga fulinta oo 3dii biloodba mar qabsooma ayaa ah mid marwalba lagaga Arinsado geedi socodka guud ee halganka iyo waliba Hawlaha gaarka ah ee ururka waxaana kasoo qayb galay xubnaha gudiga oo ka kala yimid meelo kala duwan waxaana lakala qaatay warbixino.
kadibna Gudigu waxay isla soo qaadeen qodobo dhawr ah oo ugu dambayna ay kasoo bexeen go’aamo waxku ool u ah hawlaha ururka iyo gabi ahaanba halganka shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee ay JWXO hogaaminayso Culimadu waxay baaq udirtay dhamaan shacabka soomaaliyed gaar ahaan shacabka S.Ogadenia ee gumaysi diidka ah oo ay ugu baaqday inaan laga caajisin hawlaha lagu raadinayo gobanimada, xorriyada gayiga Ogadeniya iyo in laga fogaado lagana digtoomaado dhagarta cadawga ee uu shacabka dulman umaleego iyo gabi ahaanba waxkastoo shaki galin kara wadaniyada waxna udhimi kara damiirka iyo caqliga xalaasha ah.
Ugudambayn kulanka oo labo maalmood socday ayaa lagu soo gunaanaday Qur,aan aad ubadan oo lagu akhriyay goobta waxaana dhamaan bulshada la faray in lajoogteeyo Qur,aanka iyo ducada oo loo niyaysto in ilahay shacabka dulman kadulqaado gumaysiga daashaday iyo in ilahay garabkooda noqdo geesiyada had iyo jeer dagaalka kudifaacaya shacabka Ogaadeniya.
Dardaaran dheer kadib kulanka ayaa kusoo dhamaaday jawi dagan iyada oo ladajiyay qorshayaashii lagu shaqayn lahaa mudada shirka kale kahoraysa.